I-Dalton on the Lake - Studio (inc. breakfast)
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Denice
Uyemukelwa epharadesi lakho elincane ogwini lweLake Albert, Meningie...buka ama-pelicans adansa ekushoneni kwelanga kuyilapho ejabulela indawo yokuhlala ewubukhazikhazi obuphelele okuhlanganisa nesidlo sasekuseni esinesitayela sasekhaya. Imizuzu eyi-10 ukusuka eCoorong, imizuzu engama-90 ukusuka e-Adelaide. Ilungele ukuma kobusuku obubodwa noma uhlale isikhathi eside ukuze nje ujabulele konke esikunikezayo.
Lesi situdiyo siyindawo yesimanjemanje esinethezekile, ekunikeza imibono ekhuthazayo yeLake Albert enhle kanye nengadi yekotishi khona kanye egcekeni lakho langasese kanye negumbi. Zitike ngesidlo sasekuseni esigcwele sesinkwa esisanda kubhakwa, amaqanda epulazi nokunye okuningi, okuzolungiswa ngesikhathi sakho sokuphumula kanye namabhisikidi enziwe ekhaya ukuze uphuze ikhofi lakho le-plunger.
Isitudiyo siqukethe umbhede wokunethezeka ongusayizi wenkosi ongu-1 (noma izingoma ezi-2 zenkosi) ezinelineni eliwubukhazikhazi elomisiwe lomoya, amathawula nezingubo zokugeza. Ibuye ibe nendawo yokuhlala, i-en-suite evulekile, ukuhamba nge-wardrobe futhi iqukethe ikhishi elihlome ngokuphelele elinomshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha kanye nesiqandisi esigcwele kahle kanye ne-pantry ozoyisebenzisa.
I-studio ihambisana ne-wheelchair.
4.94(63 okushiwo abanye)
4.94 · 63 okushiwo abanye
Ilokishi laseMeningie liyakwamukela futhi linobungani nezitolo zezandla, zakudala nezekhofi; konke okulindele edolobheni lasemaphandleni. Umenywa emicimbini eminingi yendawo unyaka wonke.
Intwasahlobo, ihlobo nekwindla uhambo olude, i-kayaking echibini, ukubuka izinyoni noma ukubuka nje ilanga lixuba imibala yalo yomlingo njengoba lishona ngaphansi komkhathizwe. Ichibi liheha imidlalo eminingi yamanzi phakathi nezinyanga zasehlobo. Jabulela umkhiqizo wendawo ezindaweni zokudlela eziseduze; I-mullet entsha ye-Coorong enamacebo okunambitheka kwe-tucker yasehlathini.
Uma isimo sezulu sisimame futhi sibanda, yini engcono kunokushayela idrayivu okufushane ukuya endaweni yewayini yasendaweni noma uzulazule ezitolo zasendaweni zemisebenzi yezandla noma mhlawumbe igalofu. I-Dalton on the Lake iyindawo ekahle yokuzisonga ngomunye womagazini basendaweni noma imuvi bese uphefumula umoya wezwe.
Ungabuka ama-pelicans adansa emoyeni ngenkathi uziphumulele e-Dalton on the Lake. Impilo yezinyoni zasendaweni inala futhi i-Coorong yomlingo iqhele ngemizuzu eyi-10 kuphela.
Sinenqwaba yezincwajana zezokuvakasha kanye namathiphu ohambo lwasendaweni ongawathola ngesikhathi uhlala.
Sihlala imizuzu emibili phansi komgwaqo ngakho singatholakala uma ufika ukuze sikumukele futhi sikubonise endaweni yakho futhi sabelane ngolwazi lwendawo namathiphu.